१३ बैशाख २०७७, शनिबार १४:४१
﻿﻿﻿﻿﻿ कुरा सुरु गरौं महेश बस्नेतबाट । महेश बस्नेतलाई व्यक्तिगत रूपमा म चिन्दिनँ । तर उनको कृत्यसँग परिचित छु । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा उनको परिचय सरदर राजनीतिज्ञको भन्दा अलि अलग खालको छ । अर्थात विचारको भन्दा बाहुबलको राजनीति गर्नेमा उनको नाम.....
‘ओली प्रवृत्तिको भाइरसलाई सदाकानिम्ति बिदा गरौं’:डा बाबुराम भट्टराई
१३ बैशाख २०७७, शनिबार १३:०५
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचना गरेका छन् । भट्टराईले ओली प्रवृत्ति कोरोनाभाइरस भन्दा पनि खतरनाक भएको भन्दै बेलैमा नचिनिए गम्भीर संकट आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘कोरोनाभाइरस.....
१६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०४:४८
बिगत लामो समय देखी पोर्तुगलका हामी सोझा बबुरा नेपालीहरुलाई दुतावासको ललिपप बाड्नेहरुको भिड उन्मातमा छ। कसैले आफ्नो दामको दममा ललिपप बाडेका छन्, कसैले नियम कानुनको हल्लामा बाडेका छन्, कसैले चम्चे पहुँचको बतख्वाईमा बाडेका छन्, कसैले तथा कथित बलियो.....
लोसार ,ल्हाेछार कि ल्होसार ?
९ माघ २०७६, बिहीबार १४:४२
फुर्वा शेर्पा /जापान, विशेषत: तिब्बती, नेपालको शेर्पा, गुरुङ र तामाङ जातीले नयाँ वर्षको रुपमा मनाउने नेपालको एक मुख्यपर्व हो । लोसार बौद्ध धर्म अनुयायी तामाङ्ग, शेर्पा, गुरुङ, थकाली आदि जातीले महत्वपूर्ण पर्वका रूपमा मनाउँछन् । यो चाड नेपालकाविभिन्न.....
२६ पुष २०७६, शनिबार १८:४६
एकदिन हाेईसिक( कम्पनी पार्टी )थियो।सवैजना दिनभरिकाे थकाइ भुल्दै कामको विषयमा केही कुराहरु गर्दै खानपिनमा रमाईरहेका थियाैं।त्यसैवेला छेउमा संगै वसेकाे सहकर्मी काेरियनले साेधेकाे सोध्यो – नेपालमा तिमिहरुकाे निजि घर छ? “छ” मैले उत्तर दिए जग्गाजमिन.....